Tourism inotyaira hupfumi hweJamaica kubva kuvhurwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Tourism inotyaira hupfumi hweJamaica kubva kuvhurwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Jamaica Gurukota Rezvekushanya Hon. Edmund Bartlett akaburitsa pachena kuti kubvira payakavhurwazve muna Chikumi 2020, chikamu chekushanyirwa chave kutungamira kusimudzira hupfumi hweJamaica, kuburikidza nekuwedzera kwakatsiga kwevanosvika uye mari yekushanya.
Tourism Ministry inoronga US $ 1.93 bhiriyoni mumihoro kubva kune 1.61 mamirioni evashanyi muna 2021.
Jamaica yakanyorera huwandu hwe816,632 yekumira kwevashanyi mukati megore-rimwe rekuvhurazve mwaka.
Kukwidziridzwa mukuvandudza uku kuri muchikamu nekuda kwekuvandudzwa kwemitemo yakasimba yehutano nekuchengetedza chikamu ichi uye nekugadzwa kweiyo Tourism COVID-19 Resilient Corridors.
Gurukota Bartlett vakaratidza kuti "zviyero zvekutanga zvinoratidza kuti kubvira pakavhurwa chikamu chevashanyi muna Chikumi 15, 2020, Jamaica yakanyorera huwandu hwevane 816,632 vanomira kushanya uye vakawana mibairo inosvika US $ 1.31 billon (J $ 196 bhiriyoni), pamusoro pegore rimwe nguva. ”
“Mari inowanikwa kubva muchikamu ichi yaisanganisira US $ 1.2 bhiriyoni mumashandisirwo evashanyi; US $ 28 miriyoni mumitero yekuenda; US $ 19.5 mamirioni mumitero yevatakuri uye mari; US $ 16.3 miriyoni mutero yevatakuri vendege; US $ 8.5 miriyoni mumitero yemakamuri emahotera uye US $ 8.1 miriyoni pamabhadhariro enhandare yendege, ”akatsanangura.
Akasimbisa kuti uhwu ndihwo humwe humbowo hwekuti chikamu chekushanya chiri munzira yakadzikama. Gurukota Bartlett vanowedzera kuti "kwegore razvino rekarenda, Ministry of Tourism iri kuzivisa zvekare kuendesa 1.61 mamirioni evashanyi pane fungidziro yapfuura yemamiriyoni 1.15, kuvandudzwa kwevamwe vashanyi mazana mana nemakumi matanhatu."
“Kudzoreredza kwekushanya kwave pedyo. Chikamu chedu chekushanya chiri kusimuka kunge phoenix kubva mumadota. Maonero akanaka aya mugore ra2021 achasimudzirawo fungidziro yemari inowanikwa kubva paUS $ 1.6 bhiriyoni kusvika paUS $ 1.93 bhiriyoni, iko kusimudzira kweUS $ 330 miriyoni, ”akadaro Bartlett.
Gurukota rinotenda kuvandudzwa uku, muchidimbu, mukuvandudzwa kwemitemo yakasimba yehutano nekuchengetedza chikamu ichi pamwe nekumisikidzwa kweKushanya COVID-19 Resilient Corridors, ayo aona huwandu hwehutachiona hwakadzika kwazvo hwe0.6%.
Akaona zvakare kuti iyo matanho akagonesa Jamaica kugamuchira vamwe vatashanyi 342,948 XNUMX mukati memwedzi mishanu yekutanga yegore rino (Ndira kusvika Chivabvu).
Akaratidza mari inofungidzirwa, yenguva yaNdira 2021 kusvika pakupera kwaMay 2021 iri US $ 514.9 miriyoni kana angangoita J $ 77 bhiriyoni.
“Chivabvu 2021 yakaratidza kuwedzera kunoshamisa kwevashanyi vanosvika uye vanombomira kumira, vachiwedzera zvishoma nezvishoma kubva pakati pemwedzi mwedzi kusvika kupera kwemwedzi. Zvinhu zvinoremerwa zvakanyorwa muna Chivabvu 2021 zvakaenzana 73.5%, izvi zvinopesana neyakafungidzirwa 50% yepakati yemutoro we2021, 9.3% pasi peiyo 83.1% yekutakura zvinhu yakawanikwa muna Chivabvu 2019, ”akatsanangura.
Bazi rinoramba rakangwarira tariro yevafambi vechikepe vanotanga kudzoka kutenderera Chikunguru / Nyamavhuvhu. Ngarava yekutanga kubva kuNorth America kuenda kuCaribbean yakaitika nguva pfupi yadarika uye izvo zvakasimudzira tarisiro yekumisa chikepe munguva pfupi.
Dzimwe nhau nezve Jamachando